Kulan ku saabsan arrimaha Federalka,Dowladaha Hoose iyo xallinta khilaafaadka ayaa maanta ka furmay magaalada Jowhar – STAR FM SOMALIA
Kulan ku saabsan arrimaha Federalka,Dowladaha Hoose iyo xallinta khilaafaadka ayaa maanta ka furmay magaalada Jowhar
Kulan ku saabsan arrimaha Federalka,Dowladaha Hoose iyo xallinta khilaafaadka ayaa maanta ka furmay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe.
Kulankan ayaa waxaa ka qeybgalay 70 ruux oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Sh/dhexe iyadoo kulankan ay soo qabanqaabisay hay’ada Berghof oo fadhigoodu yahay dalka Jarmalka.
Guddoomiye ku xigeenka arrimaha federalka iyo dib u heshiisiinta maamulka gobolka Sh/dhexe Abuukar Xasan Cali ayaa si rasmi ah u furay shirkan isagoo uga mahadceliyay hay’ada kulankan soo qabanqaabisay.
Kulankan waxa uu ku soo beegmay xilli muhiim ah oo ay gogasha maamul u sameynta labada gobol Sh/dhexe iyo Hiiraan ay ka fidsan tahay magaalada Jowhar.”ayuu yiri guddoomiye ku xigeenka gobolka Sh/dhexe Abuukar Xasan Cali.
Sidoo kale waxaa furitaankii kulankan goobjoog ka ahaa guddoomiyaha degmada Jowhar C/qaadir Cabdulle Buufuule isagoo sharaxaad ka bixiyay arrimaha federalka waxana uu ugu baaqay kaqeybgalayaasha kulankan in ay ka doodaan arrimaha Federalka iyo Dowladaha Hoose.
Mudada uu socdo kulankan ayaa waxaa khubaro ka socda hay’ada Berghof ku soo bandhigi doonaan xog ururin muddo lix bilood ah ay ka sameynayeen gobolka Sh/dhexe ayna ka doodi doonaan ka qeybgalayaasha natijada ka soo baxda xog ururinta.
Taliyaha Ciidamada xoogga dalka oo la kulmay Saraakiil lagu soo tababaray dalka Turkiga
Go’aanadii laga soo saaray shirkii lagu soo gaba gabeeyay Magaalada Muqdisho, ayaa waxa lahorgayn doonto Baarlamaanka